अदालतको प्रश्न : प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्ट... :: मनोज सत्याल :: Setopati
अदालतको प्रश्न : प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्ट र माफिया भन्ने? केसीको जवाफ : मैले भावनामा बगेर बोलेको होइन
डाक्टर गोविन्द केसीले आफूले भावनामा बगेर सर्वोच्च अदालतका विषयमा धारणा नराखेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्व ओमप्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको इजलासले लिएको बयानमा केसीले आफ्नो अनसन घोषणा गर्दाको विज्ञप्तीको बचाउ गरेका हुन्।
सोमबार केसीले अनसनको घोषणा गर्दै प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई भ्रष्ट र माफिया भएको आरोप लगाएका थिए। लगत्तै उनलाई अदालतको मानहानीमा प्रक्राउ गरिएको थियो।
मंगलबार प्रहरीले उनलाई बयानका लागि सर्वोच्च ल्याएको हो। न्यायाधीशद्वयको उपस्थितिमा अदालतका कर्मचारीले बयान प्रधान न्यायाधीश पराजुली प्रतिको टिप्पणीबारे बयान थिए।
'तपाँईले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायधीश भनी उल्लेख गर्नुभएको छ। यो अदालतप्रति घृणा सिर्जना गर्ने र अदालतको अवहेलना हुनेखालको हैन र? हजुरको यस्ता शब्दले अदालतको सम्मान हुन्छ?', भन्दै कर्मचारीले प्रश्न सोधेका थिए।
जवाफमा केसीले आफूले पेश गरेको कागजातलाई आधार मान्न आग्रह गरेका थिए। उनले अदालतमा ११ बुदेँ जवाफ दिदैँ गोपाल पराजुलीले न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधिनतालाई चुनौती दिएका कारणले निजबाटै अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गरेका छन्।
जवाफमा आफ्नो सवाललाई उदृत गर्दै केसीले भनेका छन् – 'यसको जवाफका लागि आधार र कारणसहित कागजात सावाल ७ मा पेश गरेको छु। त्यसैलाई आधार मानी पाऊँ। गलत निर्णय र कार्य गर्ने न्यायाधीशको बारेमा बोल्दा अदालतको अवहेलना होइन सम्मान मिल्छ।'
केसीलाई कर्मचारीले अदालतलाई लाञ्छना लगाउनुको कारण समेत सोधेका थिए। 'तपाईले अदालतको आदेश र फैसलाप्रति चित्त नबुझे मर्यादित ढंगले असहमति व्यक्त गर्न सकिने अवस्थामा अदालतप्रति जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी अशिष्ट र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुका कारण के हो?', भनेर सोधेका थिए।
जवाफमा केसीले आफूले भावनामा बगेर नबोलेको दावी गरेका थिए।
'मैले अदालतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। मैले पेश गरेको प्रकरण ७ अर्थात जवाफमा पेश गरेका कागजात नै पर्याप्त छ, मैले भावनामा बगेर बोलेको होइन', केसीले बयानमा भनेका छन्, 'मेरो प्रयासले अदालत र जनमानसमा राम्रो प्रभाव परोस् भनी भनेको हुन्छ। अशिष्ट र लाञ्छनायुक्त छैन।'
केसीलाई कर्मचारीले 'तपाँइले भने बमोजिम नै फैसला हुनुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको हो' भन्ने अर्को प्रश्न सोधेका थिए। जवाफमा केसीले 'न्याय सम्पादन राम्रो हुनुपर्ने' जिकिर गरेका थिए।
'न्याय सबैले पाउनुपर्दछ। मेरो पक्षमा मात्र फैसला हुनुपर्दछ भनी मैले भन्न खोजेको होइन। न्यायमा विकृतिहरु भित्रिएको देखेर शुद्धिकरणको लागि बोलेको हुँ। सही फैसला आएको भए आलोचना गर्नुपर्ने थिएन। फैसलाको आलोचना गर्नु अदालतको अवहेलना होइन।'
'मुलुकमा लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको न्यायपालिका विरुद्ध अमुख मुद्दामा भएको आदेशका कारण अनर्गल अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भन्ने दायित्ववोध तपाईलाई छ छैन', भन्ने प्रश्न कर्मचारीले गरेका थिए।
जवाफमा केसीले आफूपनि मुलुकमा लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गराउने प्रयासमा रहेको तर्क गरेक थिए।
'मैले दिएका अभिव्यक्ति अनर्गल होइन। तीन करोड नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी संविधानप्रदत्त स्वस्थ्य रहेर जिउन पाउने नैसर्गिक अधिकारमा हनन हुने फैसला भएकाले मैले सबैलाई सचेत गराउन खोजेको मात्र हुँ। मैले न्यायपालिकाविरुद्ध बोलेको होइन। लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गराउनु नै मेरो यो अभिव्यक्ति हो र सचेत नागरिकको दायित्व पनि हो', केसीले भनेका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २५, २०७४, ०९:१६:५०